Navoaka tanteraka ny Moto G Stylus an'i Motorola | Androidsis
Moto G Stylus an'i Motorola miboridana: naseho ny tena miavaka azy [+ Renders]
Aaron Rivas | | Motorola, About us
Motorola dia mikasa ny handefa smartphone miaraka amina stilosy, ary efa herinandro maromaro izao no fantatra. Izy ve Motorola Moto G Stylus ny anaran'ny fitaovana voalaza, izay efa fantatsika ny antsipiriany manan-danja kokoa momba ny toetrany sy ny famaritana teknika lehibe azy noho ny famoahana vaovao izay misy ny renders.
XDA-Developers Ny vavahadin-tserasera no namoaka ny antontan-taratasinay momba ny terminal. Noho ny angon-drakitra vaovao omeny dia afaka mahafantatra izay nomanin'ny orinasa ho anay izahay.
Inona no fantatsika momba ny Motorola Moto G Stylus hatreto?
Sarina namboarina tamin'ny Motorola Moto G Stylus miaraka amina stilosy
Araka ny voalaza etsy ambony, Ny Moto G Stylus dia manana efijery diagonal 6.36 santimetatra ary vahaolana 2,300 x 1,080 piksela FullHD +. Ity iray ity dia manana lavaka eo amin'ny zoro havia ambony ho an'ny fakan-tsarimihetsika fakan-tsary 25 MP misy vava (f / 2.0). Ary koa, ny processeur Qualcomm Snapdragon 675 dia ilay mipetraka ao ambanin'ny hood miaraka amina ROM 64GB sy 128GB, noho izany dia hanana tahiry roa fitehirizana izahay. Tsy voalaza ny RAM, fa fanontana 4GB sy 6GB no azo atolotra. Ny telefaona koa dia ho tonga amina kinova SIM sy dual SIM.
Ny maodera fakan-tsary any aoriana dia misy fikafika telo. Ny fakantsary lehibe dia lens iray 5 MP (f / 1) Samsung S48KGM1.7 ary ampiarahina amin'ny 16 MP (f / 2.2) zoro 117 ° "Action Cam". Ilay fakantsary fakan-tsary dia mitovy amin'ilay nanombohana tamin'ny Motorola One Action, hoy ny tatitra. Ny fakantsary dia mamela ny mpampiasa handrakitra horonantsary misy zoro malalaka na dia tazonina ao anaty paosin-tsary aza ny telefaona. Ny sensor fahatelo dia solosaina makro 2 MP (f / 2.2).
Ny Moto G Stylus dia manana scanner fanaovana pirinty namboarina aoriana ary bateria 4,000 mAh. Na dia antenainay aza fa manana fanohanana amin'ny famahanana haingana 15W farafaharatsiny izy io, ny fametrahana FCC ho an'ny fitaovana dia voalaza fa manohana ny famahanana haingana 10W fotsiny. Ny telefaona dia hanana NFC amin'ny faritra sasany, raha toa kosa ny faritra hafa dia ho very ny asany. Ny zavatra mifanaraka amin'ny tsena rehetra dia ny hamoahana ny Android 10 ivelan'ny boaty ary hanana karazany efatra isam-paritra: Amerika Avaratra, Amerika Latina, Sina, ary karazana iraisam-pirenena.
Ny Motorola Edge Plus dia nandalo ny tanan'i Geekbench niaraka tamin'ny Snapdragon 865 sy 12 GB RAM
Manasongadina ihany koa ny lozisialy sasany amin'ny lozisialy ao amin'ilay fitaovana, tsy dia nahagaga anay raha nilaza ny mpamorona ny antsipirihany rehetra momba azy ny mpanamboatra. Voalaza ao fa Ny Moto G Stylus dia hanana rindranasa izay azo alamina handefasana fampiharana na hitsin-dàlana rehefa esorina amin'ny toerany ny Stylus. Misy ihany koa ny fiasa antsoina hoe "Moto Note". Milaza koa izy io fa ho afaka hamafa amin'ny rantsan-tànana iray ny zava-bitan'izy ireo tamin'ny fampiasana ny stilazy. Ho fanampin'izay, izy ireo dia ho afaka manampy mari-drano misy daty ao amin'ireo naoty voasoratra.
Ity rindranasa ity koa dia hanoratra ny ora sy ny toerana nanesoranao ilay stylus ary handefasana fampandrenesana anao raha toa ka tsy niditra tao anatin'ny vanim-potoana voafaritra ny stilosy. Amin'izany dia azonao atao ny manara-maso ny toerana misy ny penina.
Ambany ambanin'ny Motorola G Stylus
Ny fanehoana ny faran'ny telefaona dia mampiseho izany ny stilosy dia hita eo amin'ny zoro ambany ankavanan'ny telefaona. Misy jack audio any amin'ny farany ankavia, raha misy USB-C port mipetraka eo afovoany ary misy grille mpandahateny manidina azy eo ankavanana.
Farany, ny daty famoahana ny Moto G Stylus dia mbola tsy fantatra. Na eo aza izany dia mieritreritra izahay fa i Lenovo dia hanambara izany amin'ny faran'ny volana feb. Azo atao ve ny mamoaka izany amin'ny Mobile World Congress 2020? Ity dia zavatra hitantsika fa manantena, na dia mety tsy fahita fotsiny. Toy izany koa, raha tsy ity no volana voafidy handefasana azy dia mety ny volana martsa. Tsy antenainay fa ny Motorola G Stylus dia hiandry ela eo amin'ny tsena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Moto G Stylus an'i Motorola miboridana: naseho ny tena miavaka azy [+ Renders]
Ny Realme C3 dia nohamafisina tao amin'ny Geekbench niaraka tamin'ny Helio G70
Miala voly miaraka amin'ny fizika zavatra platformer Happy Wheels, lalaovin'ny olona an-tapitrisany